Chechitatu-bato kunyorera vakaparadzwa paApple Watch | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch hapana mubvunzo iri wachi mukuwedzera uye pane zvimwe zvinhu zvinoratidza izvozvo. Pakutanga pakatangwa wachi, ese mashandisiro kana kuti zvirinani kuti vagadziri vakaita nepavaigona napo kuve pane Apple chishandiso kuburikidza ne "girazi" kubva ku iPhone.
Ini ndinofanira kutaura kuti kune echitatu-bato mafomu anoshanda chaizvo pawatch, asi kune mamwe akawanda asingaite uye nekudaro anopfuura "kudzokorora maapplication" atinawo pa iPhone pane wachi, idzi ivo vanozopedzisira vanyangarika kubva pachiuno chechiwoko munguva pfupi vachisiya yakasarudzika nzira yekuzvarwa kunyorera yewachi pachayo.
Zvese izvi zvichavandudza ruzivo neApple Watch
Mukutaura danho razvino rekudzima izvi zvisiri-zvemo zvechiitiko paawa senge ichangoburwa nyaya kwavanayo akadzima Instagram yeApple Watch, ivo vanofanirwa kuve vakanaka kumushandisi sezvo ivo vachizopa icho chinoshanda chaizvo uye nekukurumidza chiitiko chevashandisi kana iko kunyorera kukava kwemuno Asi pane zviitiko apo izvi zvechitatu-bato kunyorera zvakagadziridzwa senge Twetboot kana Teregiramu, izvo zviri musimboti zvisingazokanganisirwe nechiyero ichi.
Iyo yazvino beta vhezheni yakaburitswa neApple yeApple Watch, 4.3.1 inoratidza yambiro senge yatinayo pamusoro pemitsara iyi pese panoshandiswa isiri-yemuno yekushandisa iwachi pachayo, chinova chiratidzo chisina kujeka chekuti Apple inenge ichiratidza nzira ichatorwa neiyo smartwatch system mune isiri kure kure, ichisiya yechitatu-bato kunyorera parutivi mune ramangwana vhezheni dzeOSOS dzisina kunyatsogadzirirwa mudziyo. Iyi nhanho inogona kuve yakanaka kana yakaipa, asi izvo zviri pachena ndezvekuti Apple Watch inoda kuvandudza mune izvi uye kana panguva yese iyi isina kuzviita, zvinokwanisika kuti zvakanakisa kubvisa zvakananga aya marudzi emaapp uye siya izvo zvakagadzirirwa wachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chechitatu-bato maapplication akatongerwa paApple Watch
Asi hei, chinyorwa chisina musoro. Mupepeti haasati anzwa nezve chero chinhu chakaverengwa kunze uko. Izvo zvavacharega kubvumidzwa maApple Watch maficha anomhanya pane iyo iPhone, senge iwo ekutanga aivepo. Iye zvino ivo vanofanirwa kunge vari vekuzvarwa, kumhanya paiwachi pachayo uye kwete kungova chinongedzo chechikumbiro icho chakatangwa chaizvo parunhare. Asi pachave paine (zvechokwadi!) Chechitatu-bato kunyorera. Iyo chete nzira yekuronga nekuzviita ndizvo zvinofanirwa kunge zviri chaizvo panguva. Meseji inoonekwa kana chishandiso chikaiswa kune yekare modhi (ichimhanya pane iphone) uye ichiyambira kuti kana musimudziri akasachinja uye chichiita kuti chimhanye natively paawa, chicharega kushanda.
Mac baba akadaro
Zvakanaka Kwete, haatsvage nezve chero chinhu. Ndeipi Instagram chii? Ndichinayo pawatch yangu wachi uye ndinoramba ndichigamuchira zviziviso senguva dzose
Pindura Mac baba
Zvakanaka ... zvirinani kunyorwa kwechinyorwa kwakagadzirisa chimwe chinhu ... ikozvino zvishoma "tenda kunaka"
yakagadzirira sei pano
LaCie Rugged RAID Pro, rugged hard drive kuti ushande neMacBook yako mumunda